Welwelka Caafimaadka & Xaaladaha Joogtada ah | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Xaaladaha Caafimaadka iyo Walaacyada
Dugsigu ma siin karaa dawooyin ilmahayga?
Xaalado dabadheeraad ah oo suuragal ah in nolosha halis geliso
Goorma ayaan ilmahayga ka celiyaa dugsiga dugsiga?
Ka waran haddii ilmahaygu ku xanuunsado iskuulka?
Markasta oo ay suurtagal tahay, waa in jadwalka daawada loo qoondeeyaa in lagu siiyo guriga. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waqtiyo marka xaaladda caafimaad ee ardaygu u baahan tahay daawo la siiyo inta lagu jiro maalinta iskuulka. Markay u dirayaan wax dawo ah dugsiga, waalidku waa inuu siiyaa waxyaabaha soo socda:
Oggolaanshaha waalidka ee ah in daawada lagu qaato iskuulka.
Amar qoraal ah oo dhakhtar ama qoro daawo ruqsad haysta oo tilmaamaya baahida daawada. Amarkan waa inuu ku jiraa qiyaasta iyo inta jeer. Dhakhtarka ayaa amarka ugu soo diri kara iskuulka.
Daawada ku jirta warqadda dhakhtarka lagu qoro ee asalka ah ama kan ku qoran warqad dhakhtar iibsi. Daawada laguu qoro, weydii farmashiistaha weel calaamadeysan oo nuqul ah sidaa darteed mid ayaa guriga lagu hayaa midna waxaa lagu haysan karaa dugsiga.
Dhamaan daawooyinka lagu qaato iskuulka waa in lagu hayaa xafiiska caafimaadka. Ka-reebitaanku waa ardayda laga yaabo inay qaadaan neefta neefta ama epinephrine-ka degdegga ah, haddii ay haystaan amar dhakhtar oo qoran, oggolaansho waalid oo qoran oo ay u muujiyeen kalkaalisada dugsiga inay karti u leeyihiin maamulka. Ardayda dugsiga dhexe iyo sare waxay qaadan karaan acetaminophen ama ibuprofen haddii uu jiro foomka oggolaanshaha waalidka oo qoran oo sannadle ah oo feyl ku jira Xafiiska Caafimaadka.
Fadlan tixraac nidaamka degmada # 516 Dawada Ardayda ama la xiriir kalkaalisada caafimaadka ee shatiga ku haysata dhismahaaga.
Foomamka loo baahan yahay:
Foomka Daawada - Carruurnimada Hore
Foomka Daawada - Dugsiga Hoose-5aad
Foomka Daawada - Dugsiga Dhexe iyo Dugsiga Sare 6-12
Foomka Daawada - Daawooyinka miiska laga soo iibsado
Is-Maamulaha Neefsashada - Dhakhtar iyo Waalid
Is-Maamulaha Neefsashada - Heshiiska Ardayda
Is-Maamulaha Epinephrine-ka Degdega ah - Dhakhtar iyo Waalid
Is-Maamulaha Epinephrine-ka Degdega ah - Heshiiska Ardayda
Waa muhiim marka ardaygu leeyahay xaalad daba-dheer ama khatar nolosha ah (sida neefta, xasaasiyad daran, kaadi macaan ama suuxdin), in waalidiinta, ardayga iyo kalkaaliyaha caafimaad ee dugsiga ay iska kaashadaan sameynta qorshe lagu daboolayo baahiyaha caafimaad ee gaarka ah ee ardayga. Macluumaadkan caafimaad waxaa lala wadaagi doonaa shaqaalaha iskuulka ku habboon, hadba sida loogu baahdo, iyadoo la tixgelinayo sirta. Foomamka Qorshaha Daryeelka Degdega ah wuxuu u baahan yahay inuu buuxiyo oo uu saxeexo dhakhtarkaagu. Waxaan hoos kuugusugeynay foomam lasoojeediyey qaarkood hadii takhtarkaaga ama rugta caafimaadka aysan laheyn qorshe daryeel caafimaad oo qaabeysan. La xiriir kalkaalisada caafimaadka ee shatiga leh ee dhismaha ardaygaaga si aad ugala hadasho xaaladaha kale ee aan ku taxnayn.
Qorshaha Daryeelka Degdega ah ee Neefta
Qorshe hawleed Anaphylaxis Xasaasiyadeed oo daran
Qorshaha Daryeelka Degdegga ah ee Sonkorowga
Qorshaha Waxqabadka Suuxdinta
Waalidiinta iyo ardayda waxay had iyo jeer qabaan su'aalo ku saabsan goorta ay habboon tahay in laga maqnaado dugsiga jirro darteed. Fadlan raac tilmaamahan:
Haddii ilmahaagu heer kulkiisu ahaa 100.0 digrii ama ka sareeya 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Haddii ilmahaagu hunqaacay ama shuban yeeshay 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Haddii arday la galiyo antibiyootikada, isaga ama iyadu waa inay joogaan guriga illaa 24 saacadood ka dib qaadashada dawada ugu horreysa.
Haddii cunuggaaga ku haysto iskuul ay si weyn khatar ugu gelin lahayd kuwa kale inay qaadaan cudurka ilmahaaga.
Haddii cunuggaagu dareemo xanuun ku filan oo asaga / iyada aysan ka faa'iideysan doonin joogitaanka dugsiga.
Haddii ardaygaagu uusan u xaadiri doonin dugsiga jirro darteed, fadlan la xiriir imaanshaha ama xafiiska caafimaadka ee dugsiga ilmahaaga isla marka aad go'aanka gaarto inaad guriga ku haysato. Haddii cunuggaagu qabo dhuunta cuncunka, busbuska, injirta madaxa, isha casaanka, ama walaac kasta oo la is qaadsiin karo, fadlan ogeysii xafiiska caafimaadka dugsigaaga.
Haddii ilmahaagu bukoodo inta uu dugsiga ku jiro, waxaa lagu wargelin doonaa inaad sida ugu dhakhsaha badan u soo qaaddid ilmahaaga. Waan ku qanacsanahay wada shaqeyntaada arimahan, maadaama caafimaadka qof walba uu aad muhiim u yahay canuggaaguna wuu qadarin doonaa joogitaankaaga iyo daryeelkaaga kalgacalka leh.
Xiriiriyaasha (yada) xaaladaha deg-degga ah waa lala soo xiriiri doonaa haddii aan dareenno in ilmahaagu u baahan yahay inuu aado guriga mana awoodno inaan la xiriirno waalid / ilaaliye.
Ilmahaaga looma oggolaan doono inuu iskoolka ka baxo ogolaansho la'aan waalidka / ilaaliyaha ama qofka lala xiriirayo xaaladaha degdegga ah ee toos loo siiyo shaqaalaha Xafiiska Caafimaadka. Ilmahaaga looma siidayn doono qof weyn oo aan ka ahayn kuwa ku jira faylka waalid ahaan, ilaaliye ama xiriir deg-deg ah, ogolaansho waalid la'aan.
Fadlan cusbooneysii xafiiska dugsigaaga haddii ay jiraan wax isbeddel ah oo ku saabsan macluumaadkaaga xiriirka degdegga ah.
Daryeelka Caafimaadka iyo Talooyinka
Eye Pink (Cudurka 'conjunctivitis')
Strep Cunaha Qandhada Maqaarka
Nabaro Qabow (Herpes Simplex)
Qandho yar, dareenka guud ee jirada, finanka maqaarka oo ka bilaabma laabta, dhabarka, hoosta, qoorta iyo wajiga. Wuxuu u bilaabmaa sida kuuskuus cas oo isu beddela finan yaryar. Nabarka ayaa soo baxa maalmo yar gudahood.
Muddada Kabuubku: 10 illaa 21 maalmood, badiyaa 14 illaa 16 maalmood
Waxqabadka Dugsiga ee ku Saabsan Wada Xiriirka:
Cudur faafin dhowr maalmood ka hor inta uusan qarxin iyo ilaa vesicles qalalan. Ka reeb ilaa maalinta 6 kadib markii finanku bilaabmeen ama dhakhso haddii nabarradii oo dhami ay u engegeen qolof.
Ilaha cudurka iyo qaabka gudbinta
Ugu faafo qof ilaa qof taabashada tooska ah taabashada dheecaanka finanka ama dheecaanka sanka ama afka qofka qaba busbuska. Hal weerar badanaa wuxuu siiyaa difaac. Carruurta ku jirta daawooyinka ka hortagga culeyska jirka waxay ku jiraan halis sare. Haddii aad ilmahaaga u geysid dhakhtarka, waxay rabaan inay ka fogeeyaan ilmahaaga carruurta kale si looga hortago faafitaan dheeraad ah.
Calaamadaha neef-mareenka sare ee daran, oo ay ku jiraan indhaha oo biyo leh, hindhiso, sanka oo dareera, dareenka guud ee jirada.
Muddada Kabuubinta : Ilaa 10 maalmood
Waxqabadka Iskuulka iyo Wada Xiriirka
Xayiraad ma leh jirro mooyee. La isugudbin karo waxyar kahor intaan astaamuhu bilaaban iyo mudada astaamaha daran.
U faafi qof qof adiga oo toos ula xiriiraya dheecaanka sanka iyo afka. Sidoo kale gacmaha, nudaha ama waxyaabaha kale ee laga yaabo inay dheecaan ku yeeshaan dusha sare.
Finan, mararka qaarkood qandho ama dhuun xanuun, casaan jeegagga. Rash ayaa iman kara oo bixi kara maalmo ama toddobaadyo.
Muddada Kabuubku : 4 ilaa 21 maalmood, badanaa 4 ilaa 14 maalmood
Waxqabadka Dugsiga iyo Wada Xiriirka
Ka reeb ilaa inta laga ogaanayo MD Haddii cudurada kale ee firiirica keena keena meesha laga saaro, ardaygu wuu joogi karaa dugsiga.
Inta badan la is qaadsiiyo ka hor intaan finku soo bixin. Haweenka uurka leh iyo qof kasta oo qaba nidaamka difaaca jirka oo daciifa ayaa laga yaabaa inuu raadsado inuu la tashado dhakhtarkiisa haddii uu soo gaadho.
Qarqaryo, jir xanuun, madax xanuun, qandho xanuun cunaha, waxaa ku xiga qufac, sanka oo dareera, iyo calool xanuun.
Ka reeb dugsiga ilaa inta fiican, badiyaa 2-7 maalmood. Waa inaan xumad lahayn 24 saacadood.
Feyrasku wuxuu si toos ah ugu faafaa qufaca, hindhisada, iyo taabashada sanka ama dheecaanka cunaha ee bukaanka. Suurtagalnimada inay hawada ku jirto
Nabarro, pustules si dhakhso leh loogu daboolay jajabyo midabbo malab leh. Waxaa lagu wareeri karaa nabarro qabow. Badanaa waxaa lagu arkaa marka hore afka ama sanka agtiisa. Si dhakhso leh ayuu ugu faafi karaa.
Muddada Kabuubinta : 1 illaa 10 maalmood, marmarna ka dheer.
Ka reeb dugsiga illaa inta laga xaqiijinayo daaweynta, ama illaa nabarrada ay ka qalalayaan. Cudur faafa ilaa nabarrada laga bogsado ama 24 saac ka dib bilaabista antibiyootigyada afka laga qaato.
Bakteeriyada waxay ku faaftaa taabashada tooska ah ee nabarrada, mararka qaarkood taabashada dheecaanka sanka ama cunaha qofka waxaa lagu kala qaadi karaa dhibcaha qufaca ama hindhisada. Badanaa waxaa sababa Streptococcus ama bakteeriyada Staphylococcus.
Astaamaha: Qandho, dhuun xanuun, qanjidhada qanjirada oo barara (qoorta), madax xanuun, daal. Waxay noqon kartaa finan.
Muddada Kabuubinta: Malaha 4 illaa 6 toddobaad.
Waxqabadka Iskuulka iyo Wada Xiriirka: Ma jiro wax xaddidaad ah illaa jiran mooyee. Muddo isgaarsiinta lama yaqaan.
Qaabka Gudbinta: U kala qaad qof qof candhuuftiisa.
Ku faafidda timaha madaxa ama qaybaha kale ee timaha leh ee jirka injir ama injir. Xoqintu waxay keentaa casaan, aag u eg finan. Nits waa ukumo yaryar oo cawl / cadaan ah, oo ku dhegan timo, badiyaa waxay kudhowyihiin madaxa qoorta iyo / ama dhagaha gadaashiisa.
Muddada Kabuubinta : Isbedbeddelaya; ukumaha waxay dillaacaan 7-10 maalmood.
Ka reeb ilaa injirta iyo qanjidhada si fiican loo daaweeyo ama looga saaro. La tali baaritaanka xiriirka guriga ee loo yaqaan 'injirta' iyo injirta. Markay habboon tahay, dugsiyadu way reebi karaan illaa laga saaro dhammaan fasallada. Wixii macluumaad dheeraad ah ka eeg websaydhada Waaxda Caafimaadka ee Minnesota .
Louse waxaa lagu kala qaadaa xiriir toos ah oo lala yeesho dadka jirran. Injirta waxaa sidoo kale lagu kala qaadaa shanlooyinka, burushyada, gogosha, xirashada dharka, iyo qalabka guryaha oo kor loo qaaday.
Guduudasho xubinta taranka. Waxa laga yaabaa ama laga yaabaa inaadan yeelan dheecaan daahir ah. Cuncun indhaha.
Muddada Kabuubinta: 24 illaa 72 saacadood
Indho guduudan oo aan lahayn dheecaan daahir ah - ka reebitaan lagama maarmaan ma aha. Indho casaan leh oo dheecaan dheecaan leh ka soo baxa (malax) - laga reebay 24 saac ka dib daaweynta antibiyootiggu bilaabmay.
Badankood waxaa sababa fayras; bakteeriyada qaar. Isha casaanka ayaa sidoo kale noqon karta natiijooyinka falcelinta xasaasiyadda. Waxaa lagu kala qaadi karaa taabashada dheecaanka indhaha, sanka ama afka.
Qandho, cuna xanuun, madax xanuun, lallabo, matag. (Haddii lala xiriiro furuuruc, waxaa loo yaqaan Qandho guduudan.)
Muddada Kabuubku: 2 illaa 5 maalmood
Cudur faafa ilaa 12 saacadood ka dib daaweynta antibiyootigga ay bilaabato. Ka-reeb 12-ka saacadood ee daaweynta ee ugu horreeya iyo illaa inta aad ka dareemayso fiicnaan inaad dugsiga ku jirto.
Bakteeriyada waxay si toos ah uga faaftaa dheecaanka sanka iyo dhuunta ee dadka cudurka qaba.
Nabarro u eg nabarro, badanaa bushimaha laakiin waxay ku dhici karaan meel kasta oo maqaarka ah ama xuubka dheecaanka leh. Waxaa laga yaabaa in lagu qaldo Impetigo.
Muddada Kabuubinta : 2-14 maalmood
Waxqabadka Dugsiga iyo Wada Xiriirka: Ma jiro wax xadidaya Waqtiga la is qaadsiiyo lama yaqaan. Fayrasku wuxuu jiri karaa 5 ilaa 7 maalmood ama xaaladaha qaarkood bilo.
Qaabka Gudbinta: Virus-ka waxaa lagu kala qaadaa taabashada tooska ah ee dadka qaba cudurka, badankooduna waxay qabaan infakshanno aan muuqan
Warbixinta Dhacdada Shilka
Xasaasiyadda (daran) Qorshe hawleedka Anaphylaxis
Foomka Daawada - Dugsiga Hoose (K-5)
Foomka Daawada - Sare (6-12)
Foomka Daawada - Ka Weyn Daarta (K-12)
Codsiga Foomka Maqnaanshaha Cudurdaarka leh
Is-Maamulka Epinephrine Degdega ah (Dhakhtar & Waalid)
Is-Maamulka Epinephrine Degdega ah (Arday)
Is-Maamulaha Neefsashada (Dhakhtar & Waalid)
Is-Maamulaha Neefsashada (Arday)